ईशा गुरुङको पहलमा तरकारी बेच्ने अामालाई १ लाख ५० हजार सहयोग – Sandesh Press
सामाजिक संजालले कति बेला कस्को भाग्य बदली दिन्छ थाहा नै नहुने। प्रसङ्ग आज नगरपालिकाले गाडा अनि सामान समेत उठाएर लगेको सुकेधारा बसोबास गर्दै आउनु भएको मन्जरी आमा को भिडियो आए लगतै समाजिक संजाल बाट इशा गुरुङ दिज्जु को माध्यम बाट अहिले सम्म रु १,५०,००० (एक लाख पचास हजार) सहयोगआइसकेको छ आमाको लागि। धन्य हो दिज्जु हजुर अनि अन्य सहयोग मनहरु लाई।?
हाम्रो देसमा भ्रष्ट नेता लुटेर भएपनि हामि नेपालि जनता को मन अत्यन्तै धेरै कोमल र सहयोगि छ यहि भएर नेपालि भएको मा गर्ब लाग्छ
श्रोत यादव क्षेत्रीको फेसबुकवाल बाट
कैलालीको थारु समुदायमा पनि यतिबेला माघी पर्वको रौनक छ। मिठा–मिठा परिकार खाएर एकआपसमा रमाईलो गर्दै शुक्रबारको दिनलाई नयाँ वर्षका रुपमा मनाइरहेका छन।
तर कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१० को भौसासुरको थारु वस्ती भने शोकमा डुबेको छ। सर्वत्र माघीको रौनक छाएका बेला भौसासुर गाउँ एक होनहार छोरा गुमाएको पीडामा छ यतिबेला।
यसवर्षको माघी पर्व र नयाँ वर्षले स्थानीय मेलाराम चौधरीको उज्यालो जीवनमा अँध्यारो ल्याइदिएको छ। उनका उज्याला सपनामाथि दैवले एकाएक लात हानिदिएको छ। जीवनको साहारा खोसेको छ।
तरपनि के गर्नू ! दैवले दिएको जति ठुलो चोट भएपनि सहनैपर्ने घडीमा उनी पुगेका छन। जिल्ला कारागार कार्यालय कैलालीमा प्रहरी जवान पदमा कार्यरत छोरा जीवनको मृत्युको खबर पत्यार लागेको थिएन मेलाराम र उनको परिवारलाई।
तर जब गौरीगंगाबाट उनी धनगढी उप–महानगरपालिकाको मनहेरा स्थित सडकखण्डमा निर्माणाधिन कल्भर्टमा छोरा लडिरहेको देखे। त्यसपछि त त्यो खबरलाई पत्याउँनैपर्ने बाध्यता उनी सामू खडा भयो।
किनकी उनी कहिल्यै नफर्किने यात्रामा हिडिसकेका छन। ‘फागुनमा भाइको विवाह गर्ने तयारी थियो। तर बिहीबारको दुःखद घटनाले त्यो सपना पनि अधुरै रह्यो,’ दिपेन्द्रले भने।
जीवन र युवती करिब १ वर्षदेखि सँगै बस्ने गरेका थिए। गौरीगंगा नगरपालिका–१० को महालक्ष्मी प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत रहेका मृतक जीवनका बुवा मेलारामका अब दुई छोरी मात्र छन।
प्रहरीले जिवनले चलाउने मोटरसाइकल समेत कल्भर्टमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएकाले दु’र्घटनाकै कारण उनको मृ’त्यु भएको हुनसक्ने बताएको छ।
तर उनको मृ’त्यु प्र’करणमा अन्य कोणबाट पनि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी बताउँछ। यद्यपी अहिले नै दु’र्घटना नै उनको मृ’त्युका कारण हो भनेर प्रहरीले ठाकुवा गरिसकेको अवस्था भने छैन। दिनेश खबरबाट साभार
Prevस्व श्रीकृष्ण श्रेष्ठको डुप्लिकेट भनेर चर्चा बटुलेका टिकटक स्टार प्रकाश चन्दले पाए फिल्म खेल्ने अवसर !
Nextदु’खद ख’बर : बिहेमा दाइजो कम दि’एको भ’न्दै ८ महिनाकि ग’र्भ’वती मनजिता कौ’रको ह’ त्या (भिडियो
कलाकारहरु सङ्ग माफी नमागे दोहोरी च्याम्पियन का जर्जहरुको नाममा मुद्धा हाल्ने चेतावनी !